चेपाङ समुदायलाई कम्मल बितरण
Published: January 25, 2016 09:46 AM
धादिङ, माघ ११ । कठ्याङ्ग्रिँदो चिसोमा त्रिपालभित्र एकसरो कपडाको भरमा रात कटाउँदै आएका धादिङ धुषा गाविसका चेपाङ समुदायलाई कम्मल बितरण गरिएको छ । धादिङको पाङ्ने समाज सेवा संघ पोखराका कोषाध्यक्ष तेजप्रसाद ताङ्केले आफ्नै खर्चमा पीडितहरुलाई कम्मल बितरण गरे । सञ्चार माध्यमहरुमा चिसोका कारण चेपाङ समुदायका मानिस विरामी पर्न थालेको समाचार सार्वजनिक भएपछि आफूले सहयोग...
पश्चिम तराईमा जाडो बढ्यो, जनजीवन कष्टकर(भिडियो)
Published: January 25, 2016 14:09 PM
बर्दिया, माघ ११ । मध्य तथा सूदुरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा भएको हिमपातका कारण पश्चिम तराईमा एक्कासी जाडो वढेपछि बर्दिया लगायत आसपासका क्षेत्रको जनजीवन कष्टकर वन्दै गएको छ । यसवर्ष पश्चिम तराईमा पुष महिनाभर गर्मी महशुस गरिएको भएतापनि माघ महिनाको पहिलो साताबाट एक्कासी जाडो वढेको छ । मध्य...
नाका खुल्छ कि खुल्दैन ? यस्तो छ मधेसी मोर्चाको रणनीति
Published: January 25, 2016 12:51 PM
काठमाडौं, माघ ११ । नाकामा धर्ना कायम राख्ने तयारी– संविधान संशोधनपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे छलफल गर्न मधेसी मोर्चाको बैठक सोमबार बस्दै छ । प्रमुख तीन दलले आफूखुसी संविधान संशोधन गरेको भन्दै मोर्चाले आन्दोलनका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । ‘मोर्चाको बैठक आज (सोमबार) बस्दै छ’, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष...
रङ्गेली घटनाका मृतकको शव उठाउन मोर्चा सहमत
Published: January 24, 2016 18:51 PM
विराटनगर, माघ १० । मोरङको रङ्गेली र डाइनियामा गत बिहीबार प्रहरीको गोलीबाट मृत्यु भएका तीनजनाको शव सम्बन्धित पक्षले भोलि (सोमबार) बुझ्ने भएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आज संयुक्त मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताका साथ सहमति भएपछि शव बुझ्ने प्रक्रिया सुरु भएको हो । सोमबार तीनैजनाको शव बुझ्ने सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका...
Published: January 24, 2016 18:00 PM
रसुवा, माघ १० । रसुवाको दुर्गम यार्सा गाविसका भूकम्पपीडितलाई न्यानो कपडा वितरण गरिएको छ । हालै परेको हिमपातले चिसो बढेसँंगै त्यस ठाँउका बासिन्दालाई गैर सरकारी संस्था समरिटन्स पर्सले न्यानो कपडा वितरण गरेको हो । जिल्ला दैविक प्रकोप उद्घार समिति रसुवाको निर्देशन अनुसार जिल्लाको यार्साका १ हजार ५५ घर परिवारलाई न्यानो...
वरिष्ठ फोटोग्राफर श्रेष्ठले खिचेका तस्वीर प्रदर्शनीमा
Published: January 24, 2016 17:26 PM
काठमाडौं, माघ १० । वरिष्ठ फोटोग्राफर मुकुन्दबहादुर श्रेष्ठको १३ औं दिनको पुण्यतिथी पारेर उनले खिचेका फोटो प्रदर्शनीमा राखिएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डले आज राजधानीमा एक कार्यक्रममा गरी फोटोग्राफर श्रेष्ठले खिचेका फोटो प्रदर्शनीमा राख्नुका साथै उनले पुर्‍याएको योगदानबारे चर्चा गराएको थियो । ...
निकुञ्जका गैंडामा सेटलाईट रेडियो कलर जडान
Published: January 24, 2016 17:20 PM
बर्दिया, माघ १० । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेका दुईवटा गैंडामा सेटलाईट रेडियो कलर जडान गरिएको छ । भारतको कर्तनियाँघाट वन्यजन्तु आरक्ष र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलाई जोड्ने खाता जैविक मार्गको शिव सामुदायिक वनमा रहेका गैंडामा सेटलाईट रेडियो कलर जडान गरिएको हो । सेटलाईट रेडियो...
उपप्रधानमन्त्री थापाले गरे चीनको प्रशंसा
Published: January 24, 2016 17:05 PM
काठमाडौं, माघ १० । उपप्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले छिमेकी चीनले नेपालसँगको सम्बन्धमा सँधै राम्रो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बताएका छन् । नेपाल–चीन कुटनीतिक सम्बन्धको ६० वर्ष पुगेको अवसरमा आज राजधानीमा गरिएको कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री थापाले नेपालको आन्तरिक मामिलामा चीनले कहिल्यै हस्तक्षेप...
उपप्रधानमन्त्री रावल भन्छन्– ‘मधेसवादी दलका मूख्य माग पुरा भइसक्यो’
Published: January 25, 2016 07:54 AM
काठमाडौं, माघ १० । उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री भीम रावलले सविधान संशोधनमार्फत् आन्दोलनरत मधेसी दलले उठाएका मुख्य माग पुरा भईसकेको दाबी गरेका छन् । राजधानीमा आज गरिएको कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री रावलले मधेसी मोर्चाले उठाएका बाँकी मागबारे छलफल गर्न सरकारले वार्तामा बोलाउने बताए । उनले संविधान संशोधनलाई आन्दोलनरत...
रंगेली घटनालाई लिएर मधेसी मोर्चाले मानवअधिकार आयोगलाई गुहार्‍यो, यस्तो छ आयोगको भनाई
Published: January 24, 2016 20:56 PM
काठमाडौं, माघ १० । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आन्दोलनका क्रममा न्युनतम मानवअधिकारको ख्याल गर्न सरकार र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चालाई आग्रह गरेको छ । आयोगले आन्दोलनका क्रममा हिंसात्मक घटना हुन नदिन पनि दुबै पक्षलाई सचेत गराएको छ । मोरङको रंगेलीमा भएको आन्दोलनका क्रममा सरकारले मानव अधिकारको उल्लंघन गरेको भन्दै ज्ञापनपत्र...
रंगेली घटनामा मृत्यु भएका परिवारलाई २५ हजार किरिया खर्च
Published: January 24, 2016 13:57 PM
बिराटनगर, माघ १० । मोरङको रंगेली घटनामा मृत्यु भएकाका परिवारलाई तत्कालका लागि किरिया खर्च स्वरुप २५ हजार रुपैयाँ दिने सहमति भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा आज मधेसी मोर्चाका नेताहरुसहित बसेको सर्बदलीय बैठकमा पीडित परिवारलाई तत्त्काल किरिया खर्चवापत २५ हजार रुपैयाँ राहत दिने सहमति भएको हो । ...
नेपालको संविधान संशोधनको भारतबाट स्वागत
Published: January 24, 2016 16:57 PM
काठमाडौं, माघ १० । नेपालको संविधान संशोधनको भारतले स्वागत गरेको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति जारी गरी संविधान संशोधनको स्वागत गरेको हो । विज्ञप्तिमा ‘नेपालको संसद्ले पास गरेको दुई संशोधन सकारात्मक विकासको रुपमा हामी सम्मान गछौं र अन्य विषयहरु पनि यसैगरी सम्बोधन गरिनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ’...
के कारण जल्छ विद्युत ट्रान्सफर्मर ? ६ महिनामा मात्रै ४०६ वटा जले
Published: January 24, 2016 15:09 PM
काठमाडौं, माघ १० । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको अध्ययनमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वितरण प्रणालीमा नै समस्या रहेका कारण ट्रान्सफर्मर जलेको पाइएको छ । भारतको अघोषित नाकाबन्दीपछि अत्याधिक भार विद्युत्मा पर्दा मुलुकका विभिन्न स्थानमा बढी मात्रामा ट्रान्सफर्मरमा समस्या आएको, कन्डक्टर र फ्युज तथा केबल समेत...
तीनवटा सवारी साधन ठोक्किँदा २० जना घाईते
Published: January 24, 2016 11:59 AM
चितवन, माघ १० । पृथ्वी राजमार्गस्थित चितवनको दारेचोक–९ फिस्लीङमा आज तीन वटा सवारी साधन एकआपसमा ठोक्किँदा २० जना घाईते भएका छन् । घाइते मध्ये ६ जनाको अवस्था गम्भीर छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी नायव उपरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरका अनुसार चितवनबाट काठमाडौं आउँंदै गरेको ना ४ ख ९८७१ नम्बरको ट्रकलाई सोही...
मिटर बक्स नहुँदा पिग्मेरी गाउँमा बत्ती बलेन
Published: January 24, 2016 11:56 AM
धनकुटा, माघ १० । विद्युतीय लाइन विस्तार भएको सात महिनासम्म पनि धनकुटा नगरपालिका वडा नम्बर ८ पिग्मेरी गाउँमा बिजुली बत्ति बल्न सकेको छैन । प्रति परिवार दश हजारका दरले रकम जम्मा गरेर गाउँमा विद्युत लाइन विस्तार गरेका स्थानीयहरु अहिलेसम्म विद्युत आपूर्ति नहुँदा निराश बनेका छन् नगरपालिका...